ukucacisa ubulili benkukhu
Ukuthola ubulili bezinkukhu ezisanda kuzalwa kunzima, ngoba ngokungafani nezinye izilwane eziningi izitho zobulili zezinkukhu zikhona ngaphakathi kwemizimba yazo futhi azihlukanisi kalula. Kunezimpikiswano ezimbalwa, isibonelo, ukuthi ubulili bezinkukhu lungenziwa ngokushintshanisa inaliti ngentambo phezu kwekhanda layo. Inkukhu ikholelwa ukuthi iyindoda uma isisindo sijikeleza ngeso lengqondo kodwa esifazane uma ijikeleza ngokumelene newashi. Noma, uma ubamba inkukhu ngentamo yayo futhi iphakamisa imilenze yintombazane, kodwa uma imilenze yayo ilahleka, ngumfana.
Enye iphutha ukuthi ubulili bungathathwa ngokubheka ukuma kweqanda, umqondo wokuthi amaqanda azungezile ngabafana ke lezo eziyisiyingelezi esingumhubhe ngamantombazane.Lezi zindlela zinembile njengokuqhwabaza uhlamvu lwemali ukucacisa ubulili benyoni, amathuba akho okuthola ukuthi ubulili obuqondile azoya ngokuthi ungumuntu onenhlanhla engakanani.
Izindlela ezinembile kunazo zonke zokunquma ubulili bezinyoni ngezingcingo zobulili, ukusebenzisa izimpaphe nokulinda nokubona. Ezinye izindlela zisathuthukiswa ezivumela ukuhlonza ubulili, kodwa eziningi zazo zibiza kakhulu futhi zidinga izinqubo ezikhethekile kakhulu.
ukusebenzisa izimpaphe ukucacisa ubulili bezinkukhu
Kwezinye izinhlobo nokuzelewe yizinto ezingafani izinsikazi zibonisa izici zokuvuna ngokushesha kunamadoda. Amantombazane angase aphume kahle amaphiko, kanti abafana bangase babe nemphandla ngokuphelele. Ngokuvamile, ubude bezimpaphe zamapulangwe emaphikweni kuqhathaniswa nokwahlukanisa phakathi kwabesilisa ababili. Lokhu kusebenza kuphela ngezinkukhu ezisanda chamuselisa, njengoba umehluko uzonyamalalala ngemuva kwamasonto amabili.
Imibala yezinhlobo ezithile zingase zibonise ubulili bezinyoni. Ukulalisa Izikhukukazi ezinempaphe ezimnyama nezimhlophe nabesilisa abangenayona imidwebo, kuzoholela ekukhunjweni kwamantombazane abesilisa nabangavinjelwe. Okufanayo kungenziwa ngamaphethini ombala wesiliva negolide, abesilisa besiliva nabesifazane begolide abakhiqiza ingane zenkunkhu ezimhlophe namakhadi amhlophe noma amaqabunga amhlophe anombala obomvu. Amadoda anombala owegolde zesiliva, ngakolunye uhlangothi azokhiqiza izipulane zegolide nezezingane ezisiliva.
ukunquma ubulili benyoni ngokubuka ngaphansi kwayo
I-Vent Venting yasungulwa nguProfesa Kiyoshi Masui eJapane ngo nyaka ka1930. Yinkambiso ekhethekile kakhulu efaka ukuhlolwa kokubukwa kwenyoni ngokuba khona noma ukungabikho kwesitho socansi okubukeka sengathi iqhubu. Kukhona cishe izimo ezingaphezu kweziyishumi nanhlanu ezizonakwa.
Abalingani bezobuchwepheshe bangakwazi ukuveza ubulili ngomzuzwana ngesilinganiso sokunemba samashumi ayisishiyagalolunye enzuzweni nekhulu (90%) kuya kumashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu enzuzweni nekhulu (95%), lapho khona amazinga okunemba noma abaqeqeshiwe ngokuvamile engaphansi kwamashumi ayisikhombisa enzuzweni nekhulu (70%). Ongenalwazi ufanele nakanjani angazami, njengoba ukwenza okungalungile kungaholela ekukhunjweni nasekufeni kwezinkukhu.
Linda bese uyabona
Enye indlela yokukhomba ubulili bezinyoni ukulinda nokubona. Njengoba izinyoni zikhula, kuzocaca ukuthi yiziphi izinyoni ezingamanduna nokuthi yiziphi ezesifazane. Ngokwe-athikili ye-Poultry Bulletin, Sexing Chicken(ukucacisa ubulili benkukhu), abesilisa bazo:
qala ukuziphatha okobudoda futhi bezame ukukhalisa okweqhude.
Izimpaphe zabo zizoshintsha kusukela ekubeni sambhoxo ezijwayelekile ezikhukhukazini zicwebezele ,zinciphe ,zicije -lokhu kuholakala ezintanyeni zabo nasemuva. Ingaphezulu yamakhanda abo izokhula phambili futhi ibe nkulu kunalezo zezinsikazi
Amakhanda azoba ecijile futhi kubonakale ngawo ubulisa
Izinhlobo ezithile nazo zinezici zemibala ebonakalayo ezisiza ukuzibona